ọzọ nsogbu: m nwere ike ịkwụsị? — HunterThinks.com ọzọ nsogbu: m nwere ike ịkwụsị? — HunterThinks.com
Ihe: 09 April 2018
emelitere: 10 April 2018
ọzọ nsogbu: m nwere ike ịkwụsị?
Izu abụọ gara aga, Ma hogan anyị, nna m, nyawaa ya nkwa nyere m aka. Isi ihe m na-agwa ndị mmadụ ebe m dị ndụ bụ n'ihi na m na-atụ egwu nke Dan hogan anyị. O mere ihe abụọ mpụ megide m na m ike ịkwụsị ya. Mgbe o mebiri ya nkwa m, ọ gbalịrị-uru nke m ma na-achọta ebe m ga-ebi.
Dan hogan anyị n'oge gara aga na-eme mee ka m mgbagwoju post traumatic nsogbu nrụgide. N'ihi na nke ọjọọ ya na omume izu abụọ gara aga, M na-achịkwa n'ihi na 10 ụbọchị: M rie obere ma na-ehi ọtụtụ. M na a na-arụ ọrụ ndị ọzọ nhọrọ mee ka ego ma ọ bụ nweta enyemaka, ma n'ihi ndị nchegbu si Dan hogan anyị, niile ọganihu kwụsịrị.
I have US$35.01 (MXN$666.06) and MXN$17 (US$0.89).
Ọ bụrụ na m na-adịghị ịkwụ ụgwọ ụlọ na ụbọchị abụọ, M ga-achụpụ: MXN $ 1200 (US$63.08).
M nwere nri ga-ezuru taa, ma ọ bụghị na echi.
Inwe ihe ulo-azọpụta ego na nri n'ihi na m nwere ike esi nri. The ego bụ dịkarịa ala ihe dị ka m mgbazinye.
M mkpa na nkà mmụta ọgwụ: ọtụtụ, ọtụtụ ọgwụ.
Venlafaxine: ụbọchị atọ, ekpe.
Modafinil: gwụrụ izu atọ gara aga.
Alprazolam: otu dose ekpe.
Diazepam: gwụrụ izu isii gara aga.
Allergy ọgwụ: gwụrụ ọnwa gara aga.
Ibuprofen: gwụrụ ọnwa gara aga.
Omeprazole: 12 ụbọchị ekpe.
vitamin B: ụbọchị isii ekpe.
Total: MXN $ 3809,64 (US$200.24).
ncha, ncha ntutu, sọks, akpụkpọ ụkwụ, na ụfọdụ ndị ọzọ stof.
Atọ n'ọnwa plan mgbake
Achọrọ m ịkwụsị ọdụdọ. Achọrọ m elekwasị anya na-agwọ ọrịa kama mgbe niile na-agbalị chepụta ma ọ bụrụ na m nwere ego, na-eri. Anwụghị m ikpeazụ 30 days on US$275 (MXN$5,231.85), nke bụ ya mere na anaghị m nwere na nkà mmụta ọgwụ ma ọ bụ nri.
Ndị na-esonụ ụdị ike does not work. Ị nwere ike iji ya ma ọ bụ otu n'ime nhọrọ n'okpuru.
(ụdị wepụrụ: biko jiri a dị iche iche nhọrọ.)
Ọ bụrụ na ịzụta a 2-liter soda kwa izu : $8.69 USD – kwa ọnwaỌ bụrụ na ịzụta a ọnụ ala nri ehihie kwa izu : $26.07 USD – kwa ọnwaỌ bụrụ na ịzụta a nkiri tiketi kwa izu : $47.80 USD – kwa ọnwaỌ bụrụ na ịzụta nri abalị abụọ n'izu ọ bụla : $173.80 USD – kwa ọnwa0.1% nke ego maka n'elu 1% : $816.86 USD – kwa ọnwa
Abuse, Alprazolam, Ma hogan anyị, Diazepam, Modafinil, Omeprazole, Poverty, Poverty bụ ọnụ, PTSD, Venlafaxine, Vitamin B complex
⇐ Test? < Previous post | Next post > Oke na-arịa ọrịa na-agwọ ⇒